Ungayikhetha kanjani ithebhulethi | Izindaba zamagajethi
Ungayikhetha kanjani ithebhulethi
U-Ignacio Sala | | Tablets
Eminyakeni yamuva nje, amaphilisi abe yithuluzi eliyintandokazi emakhaya amaningi uma kukhulunywa ngokuxhuma kwi-Intanethi, ukufinyelela amanethiwekhi omphakathi, ukusesha nge-Intanethi, ukuthumela ama-imeyili ... Njengamanje emakethe esinakho amamodeli ahlukahlukene, amasistimu wokusebenza ahlukile, osayizi abahlukene, amanani ahlukene
Uma ukholwa ku kwakungu-post-pc futhi isikhathi sesifikile sokuthenga ithebhulethi yokwenza imisebenzi yansuku zonke kusuka noma ikuphi ngaphandle kokuya ngekhompyutha, nayi inkomba indlela yokukhetha ithebhulethi. Kulesi sihloko, sizocubungula izinzuzo nezinkinga zesistimu yokusebenza ngayinye namamodeli atholakala emakethe.
1 Usayizi wesikrini
2 Isistimu yokusebenza
3 Ukuhambisana / uhlelo lwe-ecosystem lwezicelo
5.1 Amathebulethi e-Android
5.2 I-Apple iPad
5.3 I-Microsoft Surface
Njengamanje emakethe esinakho osayizi abahlukahlukene besikrini abahambayo kusuka ku-8 inches kuya ku-13. Ubukhulu besikrini bungesinye sezinqumo eziyinhloko okufanele sizicabangele, ngoba uma sifuna ukwenza izinto ezihlukahlukene futhi sikuhambisa noma yikuphi, kuncane okungcono.
Uma sifuna ukuyisusa kodwa futhi sifuna ukuthola okuningi kuyo, imodeli engu-13-intshi ingaba yindlela engcono kakhulu, ikakhulukazi uma inhloso yethu ukufinyelela shintsha ikhompyutha noma i-laptop yethu ngaphandle kokudela usayizi wesikrini.
Uhlelo lokusebenza lungesinye isici okufanele sisicabangele. Yize kuliqiniso ukuthi i-Android uhlelo olusetshenziswa kakhulu emhlabeni, uma sikhuluma ngamathebulethi, into iyahluleka futhi kuningi kakhulu, ngoba izinhlelo eziningi isikhombimsebenzisi sabo asiguqulwanga ukuthi sisetshenziswe kuthebhulethis, okuthile okwenzeka ku-Apple's ecosystem ye-Apple.
Ngaphezu kwalokho, i-iOS isinikeza inani elikhulu lezicelo zazo zonke izinhlobo, izinhlelo zokusebenza eziguqulelwe esikrinini esikhudlwana esivumela ukuthi sisebenzise le nzuzo ngomakhalekhukhwini. I-Apple yenza itholakale kubasebenzisi be-iPad imisebenzi ethile efana nokuhlukanisa isikrini noma ukwenza imisebenzi eminingi, eminye imisebenzi eyisisekelo okufanele ibe nayo noma iyiphi i-tablet.
Okwesithathu, futhi yize abaningi bengakubheki njengethebhulethi, nathi kufanele sikubeke I-Microsoft Surface. Inzuzo enkulu enikezwa ibanga leMicrosoft Surface itholakala kulokho Iphethwe yiWindows 10 kunguqulo yayo ephelele, ukuze sikwazi ukufaka noma yiluphi uhlelo lokusebenza olutholakala kuma-desktops nakuma-laptops ngaphandle komkhawulo.
Windows 10 ihlanganisa inguqulo yamathebulethi alungele i-Surface, esivumela ukuthi sisebenzisane nayo sengathi yithebhulethi ye-Android noma i-iPad kodwa ngamandla nokuguquguquka esikunikezwa yi-PC.
Ukuhambisana / uhlelo lwe-ecosystem lwezicelo
Njengoba ngishilo ephuzwini elidlule, i-Android Akuyona i-ecosystem uma sifuna ithebhulethi ukufaka esikhundleni se-PC yethu njengoba inani lezinhlelo zokusebenza ezihambisanayo lilinganiselwe kakhulu. Eminyakeni yamuva nje, i-giant search ibonakala ifake lawa madivayisi ukugxila kuma-smartphone, iphutha elizobiza kakhulu ngokuhamba kwesikhathi.
I-Apple yenza cishe izinhlelo zokusebenza ezihambisanayo ze-iPad eziyisigidi, izinhlelo ezisebenzisa ngokunenzuzo ubude nobubanzi besikrini nokuthi ezimweni eziningi, yizinhlelo ezifanayo esingazifaka ku-iPhone, ngakho-ke akudingeki ukuthi senze izindleko eziphindwe kabili.
IMicrosoft eneSurface inketho ekahle uma singakwazi ukuhlala ngaphandle kwezinhlelo zokusebenza ezithile zedeskithophu esikujwayele futhi ngaphandle kwayo esingenakusebenza kahle.
Amathebulethi aphethwe yi-Android, abeka ezandleni zethu izesekeli ezifanayo esingazithola kuma-smartphones aphethwe uhlelo olufanayo lokusebenza, olusivumela ukuba sixhume ihabhu echwebeni le-USB-C ukuxhuma imemori khadi, induku ye-USB, i-hard drive noma ngisho nesiqaphi uma sisekela lo msebenzi.
Ngokwethulwa kwe-iPad Pro, abafana abavela eCupertino bandise inani lezinketho esingaxhuma kuzo ngaphandle kokuhlala sidlula ebhokisini. I- iPad Pro 2018 ithathe indawo yokuxhuma kombani wendabuko ngechweba le-USB-C, itheku lapho Singaxhuma isifundi sekhadi, i-monitor, i-hard disk noma ihabhu yokuxhuma amadivayisi ahlukahlukene ndawonye.
I-Microsoft Surface icishe ifane ne-laptop ngaphandle kwekhibhodi, ngakho-ke isinikeza ukuxhumana okufana ne-laptop, ngokuba ithuluzi elisinikeza ukuguquguquka okukhulu kakhulu lapho sixhuma noma isiphi isesekeli ukuze sandise imisebenzi esisinikeza yona.
Zonke izinhlobo zamathebulethi ezisezingeni eliphakeme zisivumela ukuthi sixhume ikhibhodi nepensela ukudweba esikrinini. Ngaphezu kwalokho, amamodeli aphethwe yiWindows, njenge-Samsung Galaxy Tab ne-Microsoft's Surface nayo ake sixhume igundane, ukuze ukuxhumana nohlelo lokusebenza kube mnandi kakhulu.
Eminyakeni yamuva, intengo yama-smartphone inyuke kakhulu, kwesinye isikhathi idlula i-1.000 euro. Njengoba iminyaka idlulile, amaphilisi nawo enyukile ngentengo ngenxa yokwanda okukhulu kwezinzuzo abasinika zona.
Isimo semvelo samathebulethi e-Android, njengoba ngishilo ngenhla kuncane kakhulu Ngoba iningi labakhiqizi liyekile ukubheja kule makethe, lishiya iningi lalo ku-Apple, okuyizinto zalo uqobo okungumnikazi wayo.
Amamodeli okwamanje anikeza inani elingcono kakhulu lemali emakethe anikezwa uhla lwethebhu le-Samsung galaxy, kusuka kwaSamsung elenza litholakale amamodeli ahlukile kusuka kuma-euro angama-180, intengo esingaba nayo ithebhulethi eyisisekelo yokwenza izinto ezine esivame ukuzenza nethimba lethu, njengokubuka amanethiwekhi omphakathi, ukuvakashela iwebhusayithi, ukuthumela ama-imeyili ...
I-Apple inikela ngebanga le-iPad elingu-9,7-intshi, i-iPad Mini, i-10,5-inch iPad Pro kanye no-11 no-12,9-inch iPad Pro range. Ipensela le-Apple lisebenzisana kuphela nebanga le-iPad Pro, ngakho-ke uma umbono wethu ukuwusebenzisa, kufanele sikubheke lapho uthenga i-Apple iPad. Intengo eyisisekelo yawo wonke amamodeli we-iPad imi kanjena:
I-iPad Mini 4: 429 euros yemodeli engu-128 GB ngokuxhumeka kwe-Wi-Fi.
I-iPad 9,7 amayintshi: ama-349 euros wemodeli engu-32 GB ngokuxhumeka kwe-Wi-Fi.
I-10,5-inch iPad Pro: ama-euro angama-729 kumodeli engu-64 GB ngokuxhumeka kwe-Wi-Fi.
I-11-inch iPad Pro: ama-euro angama-879 kumodeli engu-64 GB ngokuxhumeka kwe-Wi-Fi.
I-12,9-inch iPad Pro: ama-euro angama-1.079 kumodeli engu-64 GB ngokuxhumeka kwe-Wi-Fi.
I-Microsoft's Surface isinikeza okuthile imininingwane esingayithola kuma-laptops aphezulu kakhulu emakethe, kepha ngokusebenziseka kwezimo okunikezwa yikhompyutha ngaphandle kwekhibhodi, ikhibhodi okufanele siyithenge ngokwehlukana uma siyifuna, njengazo zonke izinhlobo ze-iPad.
Ukucaciswa okuyinhloko kweSurface:
Umseshi: I-Intel Core m3, isizukulwane sesi-5 seCore i7 / i7.
Amandla okugcina: I-128GB / 256GB / 512GB / 1TB
Imodeli eshibhe kakhulu, ngaphandle kwekhibhodi, iqala kuma-euro angama-899, (i-Intel Core m3, i-4 GB RAM ne-128 GB SSD) intengo engabonakala iphezulu kuthebhulethi, kepha lokho uma sicabangela ukungasinikezeli okusinikeza kona, Kokubili kwezicelo nokuhamba, kuyinani elingaphezu kwelifanele lethebulethi lala mandla.
Uma iMicrosoft Surface ingekho kubhajethi yakho, kodwa ufuna ukuqhubeka nokugcina umqondo wokuthi isinikeza yona, singakhetha Surface Hamba, ithebhulethi enokusebenza okuphansi ngentengo ephansi, noma ingahle isilele kwabanye abasebenzisi abafuna ngenkani. I-Surface Go iqala kuma-euro angama-449 nge-64 GB yokugcina, i-4 GB ye-RAM neprosesa ye-Intel 4415Y.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » Tablets » Ungayikhetha kanjani ithebhulethi